IZA MARINA ARY ITY MPITONDRA HAFATRA ITY? - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Satria ity fanambarana ity, dia tenin‟Andriamanitra milaza an‟i Jesosy Kristy izay nampitondrainy ny hafatra. Ka na manaraka ny fivavahana” Islamiste “ianao, na “Borah”, na “Musulman”, na “Indouiste,” na” Boudiste”, na Fivavahan-drazana, ianao na fivavahana kristiana ianao, dia izao: raha mino ianao fa misy Andriamanitra tokana, na Zanahary, hiantsoana azy, na God, na Dieu, na Elohim, na Allah, na Adonai, na Théos, no hiantsoina azy arakaraky, ny fitenin‟ny firenena azy avy, fa amintsika Malagasy, dia Andriamanitra no hiantsoana azy. Dia mazava fa io Andriamanitra tokana io no tompon‟ity fanambarana ity. Dia ahoana no ahalalana Azy io?, ahoana no hanazavana Azy io? Mety ho lavalava ihany ny fanazavana azy ity.
Fa alohan‟ny hiakarany any an-danitra ity Jesosy Kristy ity dia nanafatra tamin‟ny mpianany nanao hoe: Lioka 24:44 – 47 «44 Dia hoy Izy taminy: Izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo Aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana Ahy teo amin’ny lalàn’i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. 45 Dia nanokatra ny sain’ireo Izy hahalala ny Soratra Masina. 46 Ary hoy Izy taminy: Izany no voasoratra, fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo; 47 ary mba hotorina amin’ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin’ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. »
Ambarany mazava tsara talohan‟ny hiakarany, fa “tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana Ahy teo amin’ny lalàn’i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain’ireo Izy hahalala ny Soratra Masina.”
Fa tamin‟ny andron‟i Jesosy Kristy, ny Soratra Masina dia tsy mbola nisy ny testamenta vaovao, (Matio, Marka, Lioka, Jaona, Asa, …, Apokalypsy), fa ny soratra masina tamin‟izany andron‟i Jesosy Kristy, dia ny lalàn‟i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo, araka izay voasoratra eto amin‟ ity andininy ity. Ka ny miteny izany dia tsy i Pasitera Mailhol, fa i Jesosy Kristy no milaza izany araka izay voasoratra eto. Dia mazava fa tsy maintsy ho tanteraka izany izay nanoratana an‟i Jesosy Kristy teo amin‟io Soratra Masina io, dia ny lalàn‟i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo izany.
Ka noho izany, raha hijery tsara izany isika hoe: ahoana ny momba izany Jesosy Kristy izany? dia tsy maintsy any amin‟ireo Soratra Masina ireo no hijerentsika azy. Satria raha vao tsy mazava izany, dia ho sahirana isika hamantatra Azy sy handray ity fanambarana izay nomen‟Andriamanitra antsika ity tamin‟ny alalan‟i Jesosy Kristy.
Io Jesosy Kristy io moa izany, raha ny tena marina, rehefa tonga teto tokoa izy, dia sahirana ny olona tamin‟ny fandraisana Azy io, satria io Jesosy Kristy io tokoa dia fantatra fa, na dia mbola tsy nisy aza ny olombelona teto an-tany, dia efa nisy Izy, ary dia ireo mpaminany maro dia efa niresaka ny momba Azy avokoa. ,any ka rehefa nilaza Izy fa fony tsy mbola nisy aza ny lanitra sy ny tany dia efa nisy Izy, dia sahirana ny olona raha nandray izany teny izany, ary dia be no nilaza fa manana demonia Izy, na mandainga Izy, na miteniteny fahatany Izy.
Ohatra ho raisintsika amin‟izany ny Jaona 8:51 – 58 «51 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay.
Tsy nazava tamin‟ny olona tamin‟izany fotoana izany tokoa ny hoe: avy aiza tokoa moa ny fihavian‟ ity Jesosy Kristy ity? Fa Jesosy Kristy dia nilaza hoe: “raha mitandriana ny teniko ianareo dia tsy mba hahita izany fahafatesana mandrakizay izany”. Dia namaly ny olona hoe: “tena manana demonia tokoa ity olona ity”, Vokatry ny tsy fahalalana mantsy izany, satria tsy fantany ny marina. Ary dia toy izay koa no mahatonga ireo mpitory filazantsara sasany ireo, izay tsy mitsahatra ny manompanompa antsika ka milaza fa hoe: manana demonia isika, satria mitovy tamin‟ireo tsy fahafantaran‟ny olona tamin‟izany fotoana izany an‟i Jesosy Kristy ihany no mbola tsy hahafantaran‟izy ireo an‟i Jesosy Kristy sy ny fanahin‟Andriamanitra miasa ao amin‟i Jesosy Kristy, dia lazainy fa manana demonia i Jesosy Kristy, dia mitovy amin‟izany koa amin‟izao fotoana izao.
Jesosy Kristy nilaza fa mbola tsy nisy i Abrahama, dia efa nisy Aho hoy Izy. Dia tsy nino an‟izany ny olona, satria hoe i Jesosy Kristy aza,hono,tamin‟io fotoana io, tsy ampy 50 taona akory dia efa nilaza sahady ho nahita an‟i Abrahama. Dia manao anao ho iza moa ianao hoy izy ireo? Dia avy hitorabato azy ny olona!! Vokatry ny tsy fahalalana moa izany dia lazainy fa manana demonia Jesosy Kristy. Fa aty amin‟ny ohabolana dia misy teny milaza an‟io mazava tsara:
Aty amin‟ny bokin‟ny ohabolana izay fantatsika tsara fa ny mpanjaka Solomona no nanoratra ny boky, dia efa nahalala tsara, fa io Jesosy Kristy io no zava-boahary nohariana voalohany indrindra, talohan‟ny nahariana ny tany sy ny izay rehetra teo aminy, dia efa Izy no napetraka teo. Satria moa Izy no napetraka teo talohan‟ny olona, dia izay no nahatonga azy niteny taty amin‟ny Jaona araka izay efa novakiantsika teo iny hoe: “ravoravo i Abrahama nahita ny androko”, dia hoy ny olona hoe: “tsy mbola 50 taona akory ve ianao dia efa nahita an’i Abrahama, fa hoy indray i Jesosy Kristy fa hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa fony mbola tsy hary i Abrahama dia efa izy aho”, dia tsy azon‟ny olona mihitsy moa izany tamin‟izany fotoana izany. Ka izay tsy fahazahoan‟ny olona an‟io Jesosy Kristy io izany mihitsy no ho resahintsika, satria io ilay Jesosy Kristy tsy fantatry ny olona sy tsy azon‟ny olona io mihitsy no tompon‟ilay fanambarana.
Izy moa efa nilaza fa hoe tsy maintsy ho tanteraka izay nanoratana Azy tao amin‟ny soratra masina, dia ny lalàn‟i Mosesy sy ny Salamo ary ny Mpaminany.